ADY AMIN’NY COVID-19 : SIDINA FAMPODIANA IREO TERATANY MALAGASY ANY IVELANY (VOL DE RAPATRIEMENT) - ewa.mg
ADY AMIN’NY COVID-19 : SIDINA FAMPODIANA IREO TERATANY MALAGASY ANY IVELANY (VOL DE RAPATRIEMENT)
News - Santé - ADY AMIN’NY COVID-19 : SIDINA FAMPODIANA IREO TERATANY MALAGASY ANY IVELANY (VOL DE RAPATRIEMENT)
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Ivato – Zoma 20 Aogositra 2021
Araka ny efa nambaran’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA dia nigadona io maraina io teny amin’ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Ivato, ny Zotram-piaramanidina nitondra ireo teratany Malagasy tavela tany ivelany ary nody namonjy an’i Madagasikara.
Nilamina ary hentitra tsara ny fanaraha-maso ny toe-pahasalaman’ ireo teo am-pahatongavana.
Tsara ny manamarika fa mialohan’ny niaingan’ireo mpandeha ireo tany amin’ny toerana nisy azy dia nandalo fitialiana « PCR » avokoa izy ireo ary ireo izay nanana valim-pitiliana miiba (PCR NEGATIF) ihany no afaka niondrana tamin’ny sidina.
Teo am-pahatongavana io maraina io dia naverina natao « PCR » avokoa izy ireo ary mihiboka mandritra ny 05 andro.
Aorian’ izay dia averina atao « PCR » indray izy ireo, ary raha miiba (Negatif) dia mivoaka mamonjy ny fianakaviana. Raha sanatriavina kosa ka miabo (Positif) dia manaraka fitsaboana avy hatrany ary raisin’ ny Fitondram-panjakana an-tanana araka ny nambaran’ Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo izay tonga teny an-toerana nanaramaso ny fandaminana mikasika ny fanarahamaso ny fahasalaman’ ireo teratany malagasy namonjy fodiana ireo.
Ministera maro no mifanome tanana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny fampiharana izao fepetra ara-pahasalamana izao araka ny namabaran’ Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka hatrany.
Isika rehetra miara-mandresy ny covid-19
L’article ADY AMIN’NY COVID-19 : SIDINA FAMPODIANA IREO TERATANY MALAGASY ANY IVELANY (VOL DE RAPATRIEMENT) a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka tamin'ny : 20/08/2021
Fanabeazana maha olona: very tanteraka ny kolontsaina malagasy
Anisan’ny fototra ijoroan’ny fiarahamonina malagasy ny fananany olom-banona. Sarotra ny nandrava izany satria efa raiki-tampisaka ao amin’ny Malagasy tsirairay mihitsy ilay fanabeazana nomen’ny teo aloha. Ny ankehitriny…Iray amin’ireo nomen’ny Malagasy lanja teo amin’ny fiainany ny fanabeazana ny taranany. Azo lazaina fa nataony ho rehareha ny fananana taranaka vanona. Nisy ny « fitaovana » nampiasainy tamin’izany. Goavana indrindra ny kolontsaina. Tamin’ny alalan’ny angano, ny arira, ny antsa, ny kalo, ny kabary, ny fomba amam-panao samy hafa, ny fady, ny fahafantarana ny fisian’ny tsiny sy ny tody, fahalalana an’Andriamanitra Andriananahary, sns, ny nametrahan’ny Malagasy ny arofanin’ny fiainan’ny taranany.Very tanteraka izy ireny ankehitriny. Lasa siosion-dresaka sy honohonom-pitenenana sisa tafapaka aty amin’ny taranaka nifandimby. Toa tsy mahafantatra intsony ny fisian’Andriamanitra Andriananahary ny Malagasy ka zary lasa finoana ny fisian’Ilay Mpahary eo an-tampon’ny loha. Tahaka izany koa ny tsiny sy ny tody. Toa voasokajy ho finoana ihany koa izy ireo ankehitriny hany ka sahin’ny Malagasy sasany ny mamono sy mandatsaka aina, manimba ny hafa, sns. Mbola mety ho hita ve ny very?Mila raiamandreny mampita sy lalàna mifehyNanana ny toerany manokana teo amin’ny fiarahamonina malagasy ny raiamandreny. Ho setrin’izay, adidy goavana ny niantsorohan’izy ireny. Raiamandreny, vato namelan-kafatra. Manana adidy hitahiry sy hampita ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy ny raiaman-drenin’ny tanàna, ny raiamandrenim-pianakaviana, sns. Adidy tokony ho vitany izany tsy hananany tsiny. Rehefa mitana io andraikitra io, mila mampita ny kolontsaina malagasy ho an’ny taraaka aty aoriana. Mbola mety hitrangan’olana anefa izany noho ny tsy fahaizan’ireny raiamandreny ireny intsony ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy.Arofanina faharoa, ho an’ny famerenana ny fahalalana ny kolontsaina malagasy, ny fisian’ny lalana mifandraika amin’izany. Atao ho lalana harahin’ny tsirairay ny fitandremana ireny fomba amam-panao sy kolontsaina malagasy ireny. Ny isan-tsehatra no manao izany. Any an-tsekoly, any anivon’ny fiarahamonina, eny amin’ny toeram-piasana, sns. Ny mety ho olana indray? Toa tsy zatra loatra intsony manara-dalàna ny Malagasy sasany!HaRy Razafindrakoto L’article Fanabeazana maha olona: very tanteraka ny kolontsaina malagasy a été récupéré chez Newsmada.
« Efa volana maro no nitsidihako ny faritra Atsimo nitady vahaolana mahomby sy maharitra entina hamongorana ny tsy fanjarian-tsakafo. Izay no namolavolana ny tetikasa Avotse », hoy ny vadin’ny filoha. Efa-bolana taorian’ny fanaovan-tsonia tamin’ny mpiara-miombon’antoka maro, notokanana ny EPP tao Behodatse sy Ankazombalala, distrikan’i Tsihombe, faritra Androy, ny talata lasa teo natrehin’ny vadin’ny filoha sady filohan’ny Fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy. Tafiditra anatin’ny tetikasa Avotse ho fanampiana ny mponina ianjadian’ny kere sy tsy fanjarian-tsakafo izany, araka ny fanazavana. Fokontany roa voasakajy ho isan’ny mizaka mafy ny vokatry ny mosary ato anatin’ny faritra Androy i Behodatse sy Ankazombalala. Fokontany roa ato anatin’ny kaominina Anjampaly, distrikan’i Tsihombe ireo.Olana hafa sedrain’ny mponina koa ny faharatsian’ny fotodrafitrasam-pampianarana. Tafo bozaka no nisy teo aloha ho an’ny EPP Behodatsy ka voatery mitsahatra roa na telo volana ny fampianarana rehefa fotoam-pahavaratra. Manampy trotraka ny hanoanana ka mampihena ny tahan’ny fandehanana an-tsekoly. Hita taratra tamin’ny voka-panadinana farany teo izany toe-javatra izany. 63,63 % ny taham-pahafahana CEPE 202, hoy ny talen’ny EPP Behodatse, Ananjato Jerome Emilien. Vahaolana nentin’ny OIT sy ny fikambanana Fitia ary ny Fondation Viseo ny fanamboarana sekoly EPP vaovao ary nanome asa ho an’ny zanaky ny distrikan’i Tsihombe ny fanorenana.« Tanàna 20 no hisitraka ny tetikasa Avotse ka ny fito ao anatin’ny faritra Anosy ary 13 any Androy iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka sy mpandraharaha. Tadifiditra ao ny fananganana sekoly manara-penitra sy ny « cantines scolaires » maimaim-poana, izay mamatsy koba aina ny maraina ary vary sy laoka ny antoandro”, hoy ny filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy.Vonjy A.L’article Tetikasa Avotse: vita ny EPP ao Behodatse sy Ankazombalala (Tsihombe) a été récupéré chez Newsmada.
Tao anatin’ny roa andro…: 11 ireo namoy ny ainy, 969 ny tranga vaovao Covid-19
Tao anatin’ny faran’ny herinandro, ny 23-24 avrily, nahatratra 969 ny tranga vaovao Covid-19 manerana ny Nosy tamin’ny fitiliana 2 488. Nahatratra 716 ny tranga vaovao eto amin’ny faritra Analamanga, mitana ny laharana voalohany hatrany. 11 ireo lavon’ny valanaretina tao anatin’ny roa andro.“Momba ny vaksiny, afaka 15 andro ny ho tonga eto Madagasikara ny vaksiny nohafaran’ny fanjakana niaraka amin’ny mpiray ombon’antoka ka anisany ny mpikambana ao amin’ny Akademia nasionaly ho an’ny fitsaboana (Anamem)”, hoy ny minisitry ny Fahasalamana. Ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny mpitandro filaminana no hisitraka izany voalohany ary atao an-tsitrapo. Tafiditra ao koa ny vondron’olona marefo sy ny zokiolona. Afaka misoratra anarana amin’ity herinandro ity ireo vonona hiroso amin’izany. Hojerena ny toerana ahitana tranga maro indrindra hisantarana ny fanaovam-baksiny ka hodinihina koa ny vaksiny mety ao. Amin’ny volana jolay kosa vao hahazo ny anjarany ny daholobe avy amin’ny fandaharanasa Covax. Vonjy L’article Tao anatin’ny roa andro…: 11 ireo namoy ny ainy, 969 ny tranga vaovao Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Amboditandrohoroho: ankizivavy hantsaka vao maraina, naolana roa lahy
Nitrangana fanolanana indray ny zoma maraina ta­min’ny 5 ora tao Amboditan­drohoroho, distrikan’i Toa­masina II. Ankizivavy 17 taona niharan’ny fanolanana nataona lehilahy roa. Raha ny loharanom-baovao voaray, nifoha maraina handeha hantsaka izy no nifanehatra tamina roa lahy nitondra fivoy toy ireny mpanarato handeha hanjono ireny. Nentin’izy roa lahy avy hatrany tao anaty kirihitr’ala izy ka nanamparan’izy ireo ny filan-dratsiny. Voalaza fa ny iray, mihazona ary ny iray kosa, manararaotra manala ny filan-dratsiny ka mifandimby hatrany izy roa lahy. Mandritra izany, rahonan’izy ireo amin’ny antsy eo amin’ny tendany ilay niharam-boina ka tsy afa-niantso vonjy. Ny fanadihadiana natao tamin’ilay niharam-boina ha­trany no nilazany fa tombanany ho mpanjono na mpanarato vao avy niasa maraina izy roa lahy ireto satria nisy fivoy sy harona lehibe tany amin’izy roa lahy ireo.SajoL’article Amboditandrohoroho: ankizivavy hantsaka vao maraina, naolana roa lahy a été récupéré chez Newsmada.
Amboasary Atsimo: dahalo telo maty voatifitry ny Tafika sy ny Zandary
Henjana ny fifandonan’ny Zandary nampian’ny Tafika mpampandry tany tamin’ireo andian-dahalo tao Ambatomainty, kaominina ambanivohitr’i Ebelo, afakomaly, satria dahalo telo indray maty voatifitra raha iray kosa azo sambo-belona…Nitrangana fanafihan-da­halo tao amin’ity tanàna ity, tamin’io fotoana io, ka lasan’ireo malaso tamin’izany ny omby miisa 180. Nanao fanarahan-dia nanao fiambenana ny kizo manodidina kosa ny zandary sy ny andrimasom-pokonolona ao Ebelo, ao Mahabo sy ao Tra­no­maro ary ao Vazahalava, nampian’ireo Tafika mpiandry kizo ao Mahabo. Ny tolakandro tamin’ny 4 ora hariva, tratra tao Ambatomainty, kaominina ambanivohitr’i Mahabo, distrikan’Amboasary Atsimo, ireo dahalo niaraka amin’ireo omby ka raikitra avy hatrany ny fifandonana. Tsy nifandrenesana ny poa-basy nandritra ny fifampitifirina, araka ny fampitam-baovao voaray. Vo­kany, azo avokoa ny omby rehetra tany am-pelatanan’ireo dahalo raha dahalo telo lahy kosa lavo nitsirara tamin’ny tany, ary iray hafa azo sambo-belona niaraka amin’ny basim-borona lany bala. Namba­ran’ireo mpampandry tany fa maro ireo dahalo naratra, saingy mbola afa-nitsoaka ka eo am-panaovana hazalambo azy ireo ny Zandary miaraka amin’ny Tafika any an-toerana. Tsy nisy naratra kosa ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona nanampy tamin’ny fanarahan-dia ireo dahalo. Nankasitraka ny ezaka vitan’ny mpitandro filaminana ny vahoakan’i Ebelo.Jean ClaudeL’article Amboasary Atsimo: dahalo telo maty voatifitry ny Tafika sy ny Zandary a été récupéré chez Newsmada.
Fampitiavana ny teny malagasy: « Tompon’antoka ny mpampianatra », hoy i Haritiana Laska
10 taona nampianarana ny taranja Malagasy. Nivoaka teny amin’ny oniversite Ankatso, sampana malagasy i Haritiana Laska. Ankoatra ny fampianarana, poeta, mpanoratra, mpiantsa tononkalo amin’ny Radio izy. Mahatonga ny mpianatra hitia ny teny malagasy ny fahafahan’ny mpampianatra mampianoka ny kanto. “Tompon’antoka amin’ny fampitiavana, fampanajana ny teny malagasy ary ny soatoavina ny mpampianatra. Hamaivanin-danja ny taranja Malagasy satria noheverina fa mandeha ho azy izany. Hany ka hita taratra etsy sy eroa ny fahapotehan’ny teny, ny literatiora ary ny riba amam-pahendrena malagasy. Toe-javatra heverina ho bitika izany any am-boalohany kanefa tena manimba ny tontolon’ny fisainana ka miantraika amin’ny fiarahamonina”, hoy i Haritiana Laska.Vahaolana entiny manoloana izany ny fampianohana ny mpianatra ny hakanton’ny tenin-drazana. Azo tanterahina tsara izany satria manana tsiro mampiavaka azy ny teny malagasy, araka ny nambarany. Samy manana ny fomba fampitana fahalalana amin’ny mpianatra ny mpanabe. Miavaka ny an’ity mpampanatra iray ity amin’ny teknika entiny mitazona ny fahalianan’ny ankizy, amin’ny maha mpanoratra azy. “Karazan’ny fanerena laroina safosafo ny fampitana fahalalana manome lanja ny kanto. Mihazona ny fifantohan’ny mpianatra. Mandrisika azy ho tia ny taranja ary hitondra fahombiazana ho azy amin’ny lafiny maro », hoy i Haritiana Laska.Narilala sy HaRy RL’article Fampitiavana ny teny malagasy: « Tompon’antoka ny mpampianatra », hoy i Haritiana Laska a été récupéré chez Newsmada.